0 cycle iPhone7 Plus Battery Kuchinja neTI China Manufacturer
Tsanangudzo:IPhone7 Plus Battery Replacement neTI,0 Purogiramu IPhone7 Plus Battery Replacement,IPhone7 Plus Battery neII IC
Home > Products > iPhone Battery Nayo TI IC > IPhone 7 Plus Battery neII IC > 0 cycle iPhone7 Plus Battery Kuchinja neTI
Itsva 0 cycle iPhone7 Plus Kuchinja Li-ion Battery ne Original Texax Instruments (TI) IC
For iPhone7 Plus 2900mAh 4.3V 11.1whr
Ichi ndicho chinhu chokutanga chaunofanira kuziva pamusoro pehupenyu hwebheteri yeAlex nguva inenge mazana mashanu mumakwikwi muzhinji. A charge cycle ndeipi yakareba sei bhateri yako inotora kusvika 100%. Iwe unogona kuripa chikwereti kubva pa40% kusvika ku100%, zvichireva kuti iwe uri 60% kuburikidza nepurogiramu. Kunyangwe mushure mokuraira yako unit, iwe unoda kushandisa 40% zvakare kuti upedze marangiro epakutanga. 0 cycle iPhone7 Plus Batori Kudzokorora l i f e kunodarika 100% yakachena cobalt cell, panguva iyo I O S system c ompatible nesero inobva paI IC. iPhone7 Plus Battery Kuchinja kunowirirana ne 128GB, kunokodzera kero ye APN: 616- 00249.
Sei tichikurudzira iPhone7 Plus Battery Kuchinja neTI IC ?
1. TI IC ndiyo nzira yepakutanga ye iPhone bateri.
2. Kutengesa zvakanyanya kukurumidza, kusanyanya kunaya kupisa kuponesa upenyu hwebheteri.
3. Mhepo yakakwana yebhateri inoongorora
4. Ramba wakagadzikana kushanda uye kutengesa kunopesana
5. Bhati rine TI IC rakachengeteka, inowedzera zvakakurumidza, inotora hupenyu hurefu.
- Mukana Wokugadzirira -
Tine 3 maitiro akaenzana aunosarudza: MOQ 100pcs / chimwe chinhu.
Product Categories : iPhone Battery Nayo TI IC > IPhone 7 Plus Battery neII IC
0 cycle iPhone7 Plus Battery Kuchinja neTI Bata Ikozvino
IPhone7 Plus Battery Replacement neTI 0 Purogiramu IPhone7 Plus Battery Replacement IPhone7 Plus Battery neII IC IPhone6S Plus Battery Replacement neTI IPhone6 ​​Plus Battery Replacement neTI IPhone8 Plus Battery Replacement IPhone6S Battery Replacement neTI IPhone 6S Plus Battery Replacement